Oge mmega ahụ 5 ọ na-eme ihe dị iche? - Mmega
Isi > Mmega > Mgbapu mkpirikpi nke mmega ahụ - ihe ngwọta maka
Mgbapu mkpirikpi nke mmega ahụ - ihe ngwọta maka
Oge mmega ahụ 5 ọ na-eme ihe dị iche?
N'ikpeazụ, ndị ọkachamara atọ ahụ kwenyere na ịrụ ọrụ n'ụzọ ụfọdụ ọtụtụ ụbọchị - ọbụlagodi na ọ bụ naanịNkeji 5- dị mma mgbe niile karịa ịme ihe ọ bụla. “Ndị mmadụ na-elekwasị anya n’ihe ha na-agaghị emelimeekama ihe ha nwere ikemee, ”Ka Joyner na-ekwu. “Echekwala na ị chọrọ anwansirụpụta.Ọgọst 2 2018
Enweghị oge bụ otu n'ime isi ihe kpatara ọtụtụ ndị mmadụ ji agbasi mbọ ike idebe atụmatụ ọzụzụ ha a na-ekwu ya.
Ọ dabara nke ọma maka gị, ndị na-arụsi ọrụ ike na beavers, ọmụmụ ihe ọhụụ nke ọkachamara n'ihe gbasara ahụike bụ Dr. Brad Schoenfeld na ndị ọrụ ibe gị na-atụ aro na ọbụlagodi ma ị nọrọ ihe na-erughị minit 15 na mgbatị ahụ, ị ​​nwere ike ịnweta ụfọdụ uru. Na nyocha nke 8-izu, ụmụ nwoke iri anọ na anọ nọ na kọleji nwere opekata mpe afọ 1 nke ọzụzụ ọzụzụ ike wee kee ụzọ atọ mmega ahụ dị iche iche: olu dị elu, ọkara ọkara, na obere olu.
Ndị otu niile mere otu ihe omume 7 ahụ na ibu nke mebiri nke ọ bụla n'ime ugboro 8 gaa na 12. Isi ihe dị iche n’etiti ìgwè dị iche iche bụ ahịrịokwu ole edechara. Otu olu dị elu mere usoro 5 nke mmega ọ bụla. kwa oge, na-ebute 30 na 45 maka otu akwara kwa izu, na-eme ka usoro 45 buru ibu na-eme n'ime ahụ ike dị ala.
Mediumtù olu dị ọkara mere usoro 3, ngụkọta nke 18 na 27 setịpụrụ kwa akwara kwa izu d naanị otu setịpụrụ maka mmega ahụ, maka ngụkọta nke naanị 6 na 9 setịpụrụ kwa akwara kwa izu.
Ugbu a, ka anyị bido isi, nsonaazụ ya: Maka ndị maara akwụkwọ, ọ bụghị ihe ijuanya na, na nke a, ọ ga - akawanye mma ahụ ka a na - emekwu olu. Ntọala 5 dị elu karịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ inweta uru ahụ. Ha tụkwara ntachi obi dị na 50% 1RM bench pịa ka ọdịda.
Ndi otu nile nwere oganihu yiri ya, nke a abughi ihe ijuanya. Ntinye 12 abụghị ezigbo ezigbo maka usoro akọwapụtara iji melite ogo ntachi obi. Ọzọkwa, nsonaazụ ya abụghị ihe na-emenye ụjọ.
Mana ihe omuma sitere na ike. A na-agwakarị anyị na olu dị ukwuu maka otu ike ahụ ga-eme ka enwekwu ike, anyị enweela ọmụmụ iji gosipụta ya. Nyocha a na 2015 nke jiri nnwale yiri nke ahụ na 1, 3, na 5 setịpụrụ chọpụtara na ịbawanye ụda karịa ọtụtụ setịpụrụ rụpụtara ikike dị ukwuu karị.
Otú ọ dị, a na-eduzi ọmụmụ ihe a na ndị mbido. A na-ahapụ ndị mbido ka ha rite uru site na ọtụtụ setịpụ n'ihi na ha nwere ọtụtụ ohere iji zụlite ikike moto ha na mmemme ọ bụla, ma ọ bụ, dị ka Dr. As Schönfeld si kwuo, ahịrịokwu ndị ọzọ nwere ike ibute 'mmụba mmụta ka ukwuu'.
Ọganihu ahụ agaghị adị irè. Ugbu a maka nsonaazụ ugbu a. N'adịghị ka nkwupụta mbụ nke Schönfeld na ndị ọrụ ibe ya, ndị otu niile na-eju anya na-enwe mmụba ike yiri nke ahụ na squat na 1 rep kachasị bench pịa Mee mmega ahụ.
Nke a bụ ezigbo nghọta mgbe ị tụlere ọdịiche pụtara ìhè na oge ọ na-ewe. Ná nkezi, o were minit 68 iji mezue otu nnọkọ maka ìgwè dị elu, nkeji 40 maka otu olu dị ọkara, yana naanị minit 13 maka otu olu dị ala. Nke ahụ ziri ezi, ihe na-erughị nkeji iri na ise iji bulie uru ike.
Agbanyeghị, enwere mgbochi dị mkpa m ga-ebu n'uche. Nsonaazụ ahụ na-enye anyị ozi gbasara oke 8 ka 12 reps. Anyị enweela ọtụtụ ọmụmụ gosipụtara na iji ibu dị arọ nke 3 gaa na 5 reps na ọdịda na-arụpụta uru ike karịa ndị ọzọ, usoro dị elu na otu mpịakọta.
Ọ ka ga-ahụ ma ntinye 1 na-eduga na ndozi ike yiri nke a ma e jiri ya tụnyere usoro 5 nke 3 gaa na 5 ugboro ugboro na ọdịda. Na mgbakwunye, anaghị eji isiokwu ndị ahụ iji mee ka usoro ha daa ọdịda. Otu nwere ọnụọgụ dị elu nwere ike nwee ọfụma, nke ga-akọwa enweghị uru dị elu karịa.
Tụkwasị na nke ahụ, ụdị nha nke 34 dị obere maka njirisi 3-otu. Na mbu enwere ihe ruru iri anọ na ise, nke ga-ezu, mana iri na otu dara. N'ikpeazụ, ọmụmụ ihe a lere anya naanị ndị na-eto eto, ndị gụrụ akwụkwọ na-eguzogide ọzụzụ, n'ihi ya, anyị enweghị ike ịkọwapụta nsonaazụ ndị a na ndị ọzọ.
Nsonaazụ ahụ dị oke egwu ma na-emegide usoro ndị gara aga. Ọ bụrụ na ị na-abịa n'oge ma na-ahọrọ ịrụ ọrụ na 8-12 reps nso, mgbe ahụ ịme otu usoro nke mmega ahụ ọ bụla nwere ike izu ezu n'ihi na naanị ihe mgbaru ọsọ gị bụ ike ịbawanye. Ndo, umu-nne moro, oburu na ichoro ibu, i ka ga enweta olu ahu di oke onu.
Mee ka m mara ihe ị chere banyere ọmụmụ ihe ọhụrụ a na ihe ndị dị n'okpuru. Ì chere na nsonaazụ ya yiri nke gị? Echefula inwe mmasị n’isiokwu a ma soro ndị enyi gị hụrụ gị n’anya kerịta ya. Debanye aha na isiokwu ndị ọzọ ga - abịa n’ihu gụnyere ụdị nsogbu ọmụmụ a.
Dị ka mgbe niile, ekele maka ikiri ma nweta protein gị!
Kedu ụdị mmemme a na-eme n'oge na-adịghị anya?
HIIT gụnyereobere mgbawanke siri ikemmega ahụgbanwere oge mgbake dị ala. N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ bụ ma eleghị anya ọ kachasị ụzọ kachasị mma ijimmega ahụ(4, 5). A, a HIITrụpụtaga-esi na 10 ruo 30 nkeji oge.
Enwerem ajuju nke gi? Um, ị bụ onye ectomorph? Ma ọ bụ endomorph? Ma ọ bụ ma eleghị anya, ị bụ onye obi ụtọ mesomorph? Mba, anaghị m ekwu na ị bụ onye ọbịa ma ọ bụ ihe ọ bụla! naanị na otu onye ọ bụla nwere ụdị ahụ ọ maara na ịmara nke gị nwere ike ịbụ nnukwu enyemaka ma ọ bụrụ na ị na-achọ iwulite ahụ nrọ gị. Hazie mgbatị gị ka ọ daba n'ụdị ahụ gị ma ị ga-enweta nsonaazụ kacha mma! Ka anyi bido site na ichoputa udiri aru. E nwere atọ n’ime ndị a, dịka Dr.
Onye William Sheldon, onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ America, nyere ndụmọdụ na 1940s. Ka anyị lee ma ị̀ ma onwe gị na nke ọ bụla n’ime ha! Nke mbu enwere ectomorph. Ndị nwere ụdị ahụ a dị gịrịgịrị, na-abụkarị ndị toro ogologo, ma nweekwa aka dị ogologo.
Lelee Usain Bolt ma ọ bụrụ na ịchọrọ ezigbo ihe atụ; ha bụ ụmụ nwoke nwere obi ụtọ nwere ike iri ihe ha chọrọ ma ghara inweta ịhụnanya ma ọ bụ oke oke Na ntụgharị ihu, ectomorphs na-agbasi mbọ ike inweta uru ahụ, yabụ n'agbanyeghị ụdị mgbatị ahụ ha, ha ga-adị ụfụ ma agaghị adị ọzọ enwe ike ibu ibu ọ bụrụgodi na ha chọrọ. Ma ọ dịkarịa ala, ha nwere ike itinye ihe na-echegbu ha na otu achịcha. Ma ọ bụ abụọ.
Mgbe ahụ enwere endomorphs. Ha bụ ihe megidere ụdị nke gara aga: obere, adighi mma, ma nwekwaa ike ibu ibu site na obere iberibe ọ bụla a na-eri mgbe nri ehihie. Ihe omuma atu nke endomorph bu Danny De Vito.
Guysmụ okorobịa a na-agbasi mbọ ike ịkwụsị ibu na nnukwu afọ ha na hips nwere ike igbu ha ma ọ bụrụ na ha họrọ ịga n'okporo ụzọ egwuregwu, agbanyeghị, endomorphs siri ike karịa ectomorphs ma ha bụ ndị ezigbo bodybuilders ma ọ bụ ndị na-ebuli elu. N'ikpeazụ mesomorphs obi ụtọ. Ihe kpatara obi ụtọ dị mma, n'ihi na ha nwere akwara na abụba zuru oke, yana ikike okike ịgbanwe ahụ ha mgbe ọ bụla ọ masịrị ha.
Christian Bale bụ mesomorph zuru oke: otu anya na ọrụ ya na The Machinist na American Hustle zuru ezu ịghọta Ihe kpatara. Mesomorphs nwere ike wulite akwara n'ụzọ dị mfe ma dabara adaba n'oge na-adịghị anya. N'aka nke ọzọ, ha na-efufu oke ibu ha ọsọsọ, yabụ na ọ dịghị amasị ha ịga mkpagharị n'ogige ahụ wee jiri ụkwụ gbajiri agbaji lọta.
Oh-uh, ndụ dịịrị ya mfe, mana ọ bụghị nke ahụ dị nfe! N'ezie, ụdị ụdị ahụ atọ a abụghị otu, ị ga-ahụkwa onwe gị n'etiti. N’agbanyeghị nke ahụ, ha na-ekwu ọtụtụ akụkụ, ma ọ ga-abụ na ihe ị nụrụ ugbu a kọwara gị nke ọma, ọ bụghị ya? Mee ka m mara na ngalaba kwuru n'okpuru! Ugbu a anyị abanyela n'ozizi a, ka anyị mee omume. Pịrị isiokwu a n'ihi na ịchọrọ ịchọpụta ụdị ọzụzụ ịchọrọ, nri? Yabụ ebe a bụ ụfọdụ ndụmọdụ na omume ị kwesịrị ịme dịka ụdị ahụ gị si dị, ha ga - enyere gị aka ị nweta nke kachasị nke usoro iwu gị ma nweta nsonaazụ kacha mma. ma ọ bụrụ na ị na-anwa inweta ahụ ike, ị ga-ejedebe na akwara ahụ na-adị gịrịgịrị na wiry ị kwesịrị ime ya.
Malite na protein na mbụ. Ndị na-edozi ahụ bụ ngọngọ nke akwara gị, ma mgbe ejikọtara ya na carbohydrates, ha ga - enyere gị aka inweta oke na njedebe. Ọ bụghị njedebe gị, n’ikpeazụ.
Nsogbu dị ebe a bụ na ịkwesịrị ịdị na-eri ọtụtụ ihe karịa na ị nwere ike iri tupu oge ahụ n'ihi na metabolism gị dịkarịsịrị karịa ndị ọzọ na ịchọrọ nri karịa iji zụọ akwara gị. Ya mere, nyere onwe gị aka ma malite iri nri ndị nwere protein na carbohydrates dị elu. Agbanyeghị, kpachara anya ka ị ghara iri oke abụba n'ihi na ọ bụ ezie na abụba dị gị mma, oke nwere ike belata uru ahụ gị.
Nke abuo, gbado anya na iku oku na ibuli elu. Ihe ndi mejuputara bu ezigbo ndi enyi gi: Omume di ka ndi nwuru anwu, squats, crunches na pushups na aru oru akwara ma nyekwa aka mee ka aru gi di oso. Omume ịnọrọ onwe ya iche, n’aka nke ọzọ, ga-eme ka oganihu gị kwụsị ka ha na-ahụ naanị otu ma ọ bụ abụọ.
Na nke atọ, ejirila obi gị gbanye ya. Gba ọsọ, igwu mmiri, ma ọ bụ ịgba ịnyịnya ígwè dị mma na ihe niile, mana mgbatị ahụ ga-eme ka ị ghara ibu ibu, ọ bụghị ibu ibu. Gini mere ichoro ime ka ị ghara ịdalata ma ọ bụrụ na ị dịlarị gị ala dịka alaka? N'agbanyeghị nke ahụ, 'emebigala ihe ókè' apụtaghị na ị gaghị eme ya ma ọlị.
Cardio siri ike na - enyere gị aka ịmịnye ọbara gị na ihe na - edozi ahụ ahụ gị bụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na iburu ya na protein na carbohydrates, ha nwere mmetụta dị mma n'ahụ gị mgbe ị na-ekpo ọkụ nke ọma. Na mkpokọta, ọ bụrụ na ị bụ ectomorph, gbado anya na iri nri ọtụtụ, na-eme mgbatị ahụ dị ukwuu, ma na-aga kadị dị mfe. N'ụzọ a, ị ga - ahụ nsonaazụ ọma n'oge na - adịghị anya. 2.
Ọgwụgwọ Endomorph Ọ bụ ụdị maka ụdị a ka ọ dị arọ n'úkwù ya na obere ubu ya. Ha nwere mkpụrụ ndụ ihe nketa nke na-akpata nke a: usoro ịchekwa abụba na-arụ ọrụ n'ime gị, na-akwadebe gị maka oge agụụ. Obi dị m ụtọ na oge nri adịghị ụkọ agaala, yabụ ugbu a ọ ka mma ilekwasị anya na otu ị ga-esi gbanye ibu gị site n'úkwù gị gaa na akụkụ ahụ gị ma dozie ọdịdị gị niile.
Agaghị m ezoro gị ozi ọjọọ: endomorphs nwere oge kachasị sie ike ịkwụsị ibu, mana - ma lee, anyị bụ - ị gaghị agba ọsọ ruo ọtụtụ awa ma mee ka igwe na-agba ọsọ na ọsụsọ gị, ka onye nkuzi doro anya Will Purdue kwuru mgbatị ahụ oge niile na-eme mgbe niile anaghị enyere aka gbaa abụba. Oge mmega ahụ na-arụ ọrụ nke ọma ma na-ewe obere oge karịa karịa ịgba ọsọ ma ọ bụ ịgba ịnyịnya. Dịka ọmụmaatụ, ịgba ọsọ bụ usoro dị egwu nke ị nwere ike iji belata ngwa ngwa.
Oh, ma chefuo banyere crunches. Ha na aru oru maka aru ndi ozo ma obughi Gi. Crunches dị mma maka ụda akwara, mana ha anaghị ere abụba ma ọlị, yabụ na ịnwere ike ịnweta mkpọ isii ma ị maghị ya! Iji kpuchie elu ahụ gị ma yie obere ka Iji mee ya ka ọ dị ka ube, ị kwesịrị ilekwasị anya na iwepụ afọ gị site na osisi fir gị, wee mee ka ị na-ebuli elu.
Ibu arọ na cardio ga-arụ ọrụ ebube nye gị n'ikpeazụ. Naanị ịkwadebe maka ọsọ a ka ọ bụrụ, nke ọma, ogologo oge - endomorph nke mgbatị ahụ abụghị otu achịcha mgbe ọ na-abịa achicha, ọ bụ oge iji sị goodbye na achịcha dị iche iche. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ibu ibu ma dị mma, ịkwesịrị belata nri kalori ụbọchị gị n’ihe dị ka 1,750 kcal.
N’ezie, belata kalori calorie gị, ọ ga-eme ka ị ghara ibu ibu ọsịsọ, mana ọ dịghị mma ịkwụsị ya. Ọ bụrụ na ị na-erubere calorie 1,500 otu ụbọchị ka ị na-a sweụrị ọ happụ na mgbatị ahụ, ị ​​nwere ike mechaa chọta na ike gwụrụ gị. Ọ dị mma ịnọ obere agụụ mgbe niile, mana echefula idebe ogo ike gị elu.
Iji chịkọta ihe niile m gwara gị, mee ọzụzụ dị omimi, dobe mgbatị ogologo oge, jupụta ubu gị na oke, ma belata nri calorie gị karịa ihe ị na-eji kwa ụbọchị. Ma n'ezie, ekwesịrị inwe obere carbohydrates na nri gị na protein ọzọ. 3.
Ọgwụgwọ Mesomorph Ọfọn, mesomorphs kachasị dị mfe iji na-emega ahụ. Ọ bụrụ na ị bụ ụdị a, ikekwe ị nwere anya dị mma na ị nwere ike ịchọpụtala na ọ dịịrị gị mfe ịnweta oke ahụ ma ọ bụ hapụ abụba. I kwesiri iburu n'uche onwe gi dika onye obi uto na don't ghaghi ihu oke ekworo na ihu m ugbu a.
Ka o sina dị, ọbụlagodi na mesomorphs meriri mkpụrụ ndụ ihe nketa jackpot, a ka nwere ohere imeziwanye. Banyere ọzụzụ, ihe mbụ ị ga - eme bụ ịkwụsị onye ọ bụla na - ala azụ ma bido ịme mgbatị. Bodydị ahụ gị na-enye gị ohere ịhapụ ọtụtụ ihe n'emeghị ọtụtụ mmebi, na ọtụtụ mesomorphs na-emejọ omume a na-adịghị mma nke ahụ ha, nke pụtara na ị kwesịrị ilekwasị anya na ịme ihe niile na nhazighi oke mana ịtọlite ​​ebumnuche akọwapụtara nke onwe gị n'ihi na ị na ị nwere ike mfe ime ogologo nkeji ma ọ bụrụ na ị chọrọ.
Ọzụzụ nke ike bụkwa ihe ọ bụla gbasara oke ibu na oke ibu yana ọnụ ọgụgụ nke ikwughachi site na obere ruo obere. Nke ahụ kwuru, ọ bụrụ na ị na-eweli arọ dị arọ, 4-6 reps ga-ezu. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ibuli ọkụ dị larịị, a na-anabata gị ka ịmeghachi ugboro ugboro 15-18.
Nke a kwesịrị ịdị mfe site na ntachi obi ebumpụta ụwa gị na ume gị. Ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ nwere ebumnuche doro anya na-enweta ihe kachasị mma site n'ụdị ahụ ọla edo gị ka ị nwee ike ịme karịa Karịa ịnya isi na ya. Ee, m ka na-ekwo ekworo.
ịnyịnya ígwè ochie
Banyere atụmatụ nri, ọ nwere ike ịdị jụụ ebe ọ bụ na ị gaghị enwe ike ibu ibu dị ka ngwa ngwa nke endomorphs ma ghara ịnwe nri na carbohydrates na protein dị ka ectomorphs. Ihu ọma, ị nwere ike ilele ike gị ka ị nọrọ n'ime 2,500 kcal, belata oke abụba na carbohydrates, yana n'ozuzu nwee obi ụtọ na ị bụ mesomorphic, ma ọ bụghị na ị nwere ike iri ihe ịchọrọ. Nchịkọta ngwa ngwa: setịpụrụ onwe gị ụfọdụ ebumnuche ịchọrọ iru, mejuo onwe gị na imega ahụ na iriju afọ nke obi gị na-enweghị iri abụba na carbohydrates.
Have chọpụtala n'ime ụdị ahụ atọ a? Mee ka m mara n’ihe a! Ọ bụrụ na ị mụta ihe ọhụrụ taa, dị ka isiokwu a ma soro enyi gị kerịta ya, mana - hey! - Ekwela ịgbanwe n'ime ọhụrụ shapes nnọọ ma! Anyị nwere ihe karịrị 2,000 isiokwu dị mma iji lelee. Ihe ị ga - eme bụ ịhọrọ aka ekpe ma ọ bụ aka nri, pịa na ya wee nwee ọ !ụ! Nọgide na ndụ dị mma!
A nkeji iri abụba ọkụ mgbatị na n'ezie na-arụ ọrụ. Ihe omume ndị a gụnyere n'ọtụtụ mmemme mmega ahụ siri ike nke na-agaghị ewe ihe karịrị nkeji iri. Nwere ike ịkpụzi oge ọ bụla, naanị ị ga-enweta usoro ahụ nke ọma.
Ọbụna ndị na-ekwo ekwo nwere ike ịchọta oge iji mee usoro mmezi asaa a. I nwere ike ime ha niile mgbe ị na-elele isiokwu ahụ! Gbalịa ya. Ọ bụ mgbatị dị mfe ma na-atọ ọchị.
Tupu ịmalite imega ahụ, kpoo ahụ ọkụ. Kpoo ahụ ọkụ nke ọma iji zere mmerụ ahụ mgbe ị na-emega ahụ. Mgbe ị na-ekpo ọkụ, ị nwere ike ịme ụfọdụ squats.
Buru ụzọ mee ise.otu abụọ atọ anọ anọ dị ukwuu. Ọzọkwa, gbalịa ịgbanye aka na ụkwụ, mgbagharị ahụ na ihu, na ikpo ọkụ maka olu na ikpere, ị dịkwala njikere maka mgbatị ahụ anyị na-agba.
Ka anyi bido. Emega nọmba otu - sumo jump squats. Mee ka ụkwụ gị abụọ gbasaa na mkpịsị ụkwụ gị chere ihu.
Sere azụ gị hie nne ntakịrị. Ugbua gbue ruo mgbe ikpere gị ga-ehulata n'akụkụ aka nri. I bu ibu n’elu gi, woli elu ma jiri nwayọ rituo.
Ikwesiri imeghari mgbatị ahụ ugboro iri na abụọ. Aga m enye gị sekọnd iri atọ ka ị gwụchaa ikpe ahụ ma anyị ga-agụta gị. otu abụọ atọ anọ na ise isii asaa asaa asatọ itoolu Naanị atọ ọzọ ugboro ugboro! iri na iri na otu iri na abụọ mere nke ọma.
Dị njikere maka nke na-esote. Site n'ụzọ, ị kwesịrị ị na-eme mmega ahụ niile n'otu n'otu, na-akwụsị izu ike naanị mgbe ọ dị mkpa. Mmega nọmba abụọ - ihe ntinye aka na aka welie.
Were atụmatụ ụkwụ gị, ụkwụ gị, na olu gị n'ahịrị kwụ ọtọ; iku ume, kuọ ikiaka gị iji mezie akụkụ aka nri, wee gbadaa. Ka anyi nwalee ya .otu-abuo-ato-ato I nwekwara ike ime nke a na ikpere gị.
Ise na isii na asaa Do na-eche na akwara gị na-agba ọkụ? Nke ahụ pụtara na ị na-eme ya ọfụma. Iri na asatọ na iri na otu ikpeazụ nke iri na abụọ. Enwere mmemme asaa n’usoro a, ma anyị emeela abụọ.
Gaba. Ahụ gị nrọ na-eme n’ụzọ. Mgbatị nọmba atọ - Plank jump.
Were ya na ụkwụ gị, azụ na olu gị n'ahịrị kwụ ọtọ, ụkwụ gị na mọzụlụ afọ gị siri ike. Dọọ ụkwụ gị n'akụkụ aka gị ka ị na-awụli elu. Wee gbagoo ma dozie ogwe aka gị.
Laghachi n'ọkwá nkwado oche ma wụghachi n'ọnọdụ mbụ. Ugboro ole ka ị kwesịrị ime? Iri na abụọ ọzọ. Aga m enye gị sekọnd iri atọ.
Ọ ga-ezu. Njikere e? Cheta na imega ahụ ga-eme ka ike gwụ gị, mana ike agwụla gị. Mee ka ọ dị mma ma dịkwa mfe.
Emegharịla onwe gị ike. Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị, kwụsịtụrụ isiokwu ahụ ma zuru ike. Gbalịa ilekwasị anya na ọrụ ahụ ike gị ma wepụ echiche ọjọọ n'oge mmega ahụ.
Echiche ziri ezi dị ezigbo mkpa. Ị dịla njikere? Oge adighi umengwụ. Ka anyị gaa na mmega ọzọ.
Mmega nọmba anọ - na-adọta ikpere ikpere. Ọnọdụ mbido bụ plank agbadoro ikpere aka gị. Dụga ikpere aka ekpe gị na ikpere aka ekpe gị.
Mgbe ahụ laghachi na mmalite ọnọdụ. Tinyegharịa ọzọ ụkwụ. Dị ka ọ dị na mbụ, ị kwesịrị ịmegharị mmega ahụ ugboro iri na abụọ.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịgụta mgbe ị na-emega ahụ, nanị mee ya sekọnd iri atọ. Nke a bụ ọkara nkeji gị. Dụga ikpere aka ekpe gị na ikpere aka ekpe gị.
Mgbe ahụ laghachi na ọnọdụ mmalite. Mee ugbu a maka ikpere aka nri. Aka ekpe Gaa n'ihu ruo mgbe oge ruru.
Number ise - wụpụ gaa n'ihu ma gaa n'akụkụ. Wụpụ site na ọkara squat na n'akụkụ n'akụkụ nke ọzọ. Ugboro ole ka ị kwesịrị ime? Uh-huh.
Iri na abụọ n'ezie. Ọ bụrụ na m ga-agụta gị, Ọ dị mma, ka anyị pụọ. Otu-abụọ-atọ-anọ-na-ise-na-isii-asaa-asaa ị na-eme dị ukwuu.
n'ịnyịnya ígwè doping
Akwụsịla. Asatọ iri na itoolu na iri na otu The ikpeazụ iri na abụọ. Ị dịkwa mma? Ọ bụrụ na ịchọrọ ezumike, kwusi isiokwu ahụ, nwee mmiri, jegharịa n'ụlọ wee hichaa ọsụsọ gị na akwa nhicha.
Aga m enye gị sekọnd iri ka ị zuo ike, ọ dị mma? Ma egbula ala - gaa n'ihu na-agagharị. Njikere ugbu a? Dịkwa mma. Mgbatị isii - Plank with Raised Hand.
Mee plank gị n'ụkwụ gị, azụ na olu gị n'ahịrị kwụ ọtọ na akwara ụkwụ gị na azụ gị na-ewute. Jiri nwayọ bulie aka nri gị ruo mgbe ọ dabara na ala, ma mee ka ụkwụ aka nri gị gaa n'akụkụ. Laghachi na ọnọdụ mbido wee mee otu ihe ahụ na ogwe aka gị nke ọzọ.
Ka anyị megharịa ugboro 3 maka akụkụ ọ bụla. Malite na aka nri aka nri na ụkwụ aka nri gị. Abụọ abụọ atọ Ugbu a n'akụkụ aka ekpe .otu abụọ na atọ Ọfụma! Ị ma nke mere? Anyị nọ na mmega ikpeazụ.
Emega nọmba asaa - jumps na ikpere gị obi. Guzo n'ikiri ụkwụ ubu obosara gị abụọ. Ikpere gị kwesịrị ịgbado ụkwụ aka gị dịkwa n'ihu gị.
Wụlio ma dọpụ ikpere gị niile ka ị nwere ike ime n’obi. Jiri nwayọ ala. Jikere ma megharia mmega ahụ ugboro iri na abụọ.
Nke a bụ ọkara nkeji gị. Mee ka ọ dị mma ma dị mfe - enweghị ọsọ. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe omume ndị a mgbe niile, ahụ gị dum ga-agbanwe n’ime izu ole na ole.
Nwere ike ọgwụgwụ? Nke ahụ dị mma. Sekọnd iri ịga. Iri itoolu na asatọ asaa asaa isii ise anọ atọ abụọ otu nnukwu ọrụ! Tinyegharịa ihe niile a ụbọchị abụọ ọ bụla, na-anwa ịbawanye ọnụ ọgụgụ ugboro ugboro.
Mgbe izu atọ gachara, mụbaa oge ọzụzụ na nkeji iri abụọ. Nwara mmega ahụ tupu oge a? Kọọ ahụmahụ gị na ihe ndị a. Echefula ịpị bọtịnụ dị n'okpuru isiokwu ahụ wee pịa 'Idenye aha' iji nọrọ n'akụkụ ihuenyo nke ndụ.
Kedu mmega ahụ?
Ọzụzụ darabụ kpọmkwem ihe ọ na - ada ka -mmega ahụji oberegbawaranke dị ikemmega ahụ. TypedịọzụzụEzubere iji nweta nsonaazụ kachasị na obere oge, na-enyere gị aka iwulite ahụ ma gbaa abụba na obere nkeji ụbọchị.
Hey ụmụ okorobịa, Dr. Ax na ebe a na Dr. Chelsea.
Anyị ga-egosi gị ndị mbido ịkụziri ọzụzụ. Otu n'ime ajụjụ ndị kachasị mma m na-enweta n'aka ndị mmadụ bụ, 'Hey, gịnị ma ọ bụrụ na m na-amalite ịmalite ịkụziri mmadụ ọzụzụ? ihe omume kachasị mfe, dị mfe, dị ala iji bido? Enwere m ike ịgwa gị na DVD abụọ anyị burst Fit nwere mbido ndị mbido. Yabụ ị ka nwere ike ime DVD abụọ dabara.
Mana anyị ga-egosi gị ụfọdụ mmemme nkuzi kachasị mfe, kachasị mma, maka ịkụnye maka ndị mbido. Na Dr. 'Chels na m ga-egosi ma.
Anyị ga-amalite site na ịsagharị squats. Chelsea ga-egosi gị. Naanị ị ga - eme ihe ngosi, anyị ga - egosi gị ebe a, maka ihe dịka 10 sekọnd.
Na ị ga-pulsate dị ka na. Na nke mbụ 10 sekọnd ị naghị eche ya. Mgbe sekọnd 20, ịmalitere ọkụ iji nwee mmetụta.
You chọkwara ịrapara na butt. Enweghị mmetụta ebe a na ị na-azụ ụkwụ gị, otu akwara kachasị gị. Nke ahụ pụtara na ị na-enwu ọtụtụ abụba. ị ga-ezu ike ma ị nwere ike ịme oge dị iche iche.
Ọtụtụ mgbe 20 sekọnd na, 10 kwụsịrị ma ọ bụ 40 sekọnd na, 20 gbanyụọ, ka anyị na-ezi ihe na mmemme BurstFit. Ihe ọzọ anyị ga - eme bụ na anyị ga - egosi gị ụfọdụ ịkwanye. Nwere ike ịme ọfụma ọ bụla ma ọ bụ mee ikpere ikpere.
Na Dr. Chelsea ga-agbadata ebe a gosi gị otu esi eme ya. I nwere ike dinara n’ute.
Ọzọkwa ị pụrụ ịhụ ha ebe a: ubu ubu iche, na ikpere gị. Igha ala ugboro ugboro, gbadata ala. Yabụ i nwere ike ime nke a ma ọ bụrụ na ị bụ onye mbido.
Ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ike, ị nwere ike ịmalite ịme mgbatị oge niile dị ka nke a. Na n otu ike gwụrụ gị, ị ga-ehulata ikpere. Nke a na-arụ ọrụ mpaghara obi, ahụ dị elu.
Ezigbo mmalite. Omume ọzọ anyị ga - eme bụ igosi gị obere crunches. Dr.
Chelsea dị mma ebe a na-enweghị isi na isi. Ya mere, ọ nọ ala ebe a n'azụ ya. Nwere ike ịhụ ụkwụ ebe a, debe ha ka ha dịrị, wee gbagote ọtọ.
Ọ naghị agbanye nnukwu. Ma mgbe ụfọdụ ọ dị mma, ịnwere ike itinye aka gị na afọ gị. Gbaa mbọ hụ na ọ dị gị ka ọ na-agbanwe ebe ahụ.
Guzo ọtọ. Zuru okè. Dịkwa mma.
Dịkwa mma. Na-arụ ọrụ na isi. Dịkwa mma.
Osote. Ọzọ anyị ga-egosi gị squats, gosi thrusts. Ọfọn, ọtụtụ n'ime anyị anụla banyere burpe.
Maka otutu ndi mmadu ihe a siri ike. Ngwongwo squat bụ ụzọ dị mma iji rụọ ọrụ ahụ gị dum; ubu gi, isi gi, ukwu gi Dokita Chelsea gosiputara ihe ndi mmadu na-acho ebe a ka ha gha abia.
Gaa n'ihu. Ala. Youkwesighi ịwụ elu ma ọ bụrụ na ị chọghị.
Can nwere ike bịa na tiptoe dị ka nke ahụ. Pụrụ ịhụ ebe a na ugbu a ị na-emesị na-egosipụta ụmụ ehi gị. Ezigbo nrụgide, n'ebe ahụ, yana ahụ dum.
Aga m agbadata ebe a mee ole na ole. Dị mfe. Mee obere squats.
Na l mmemme izizi anyị ga-eme ka ị mee ebe a bụ ime mkpọtụ. Ma ị nwere ike ime nke a site na ibu ma ọ bụ na-enweghị igwe. N’ezie anyị ga-eme ka ị daa azu, naanị ị nweta otu ụkwụ azụ, ị ga-ada azụ azụ.
Pụgharịa elu, laghachi. Pịa, laghachi. Pịa
Yabụ, ịnwere ike ime nke a ma ọ bụ na-enweghị igwe. N'ụlọ. Ọzọ 20 ruo 40 sekọnd.
Ma ị zuru ike oge ọkara. Chei! Ya mere gbawara ọzụzụ maka ndị na-amalite. Ka m gwa gị.
Naanị n'ihi na ọ na-ekwu 'onye mbido' apụtaghị na ọ bụ mgbatị dị mfe, ọnụọgụ obi gị ka ga-arịgo, ị ka ga-enwe mmetụta na mọzụlụ gị ma ọ ka na-arụ ọrụ na abụba na-ere ọkụ ma na-enyere gị aka ịhụ nsonaazụ n'ezie, ngwa ngwa. Hey: Ọ bụrụ na ị hụbeghị Burst Fit ma ọ bụ Burst Fire, lee DVD ndị a nke ọzụzụ ọzụzụ maka ndị mbido yana mgbatị dị elu. Nke ahụ bụ Dr.
Josh na Dr. Chelsea nwere nsogbu.
Enwere m ike ibu ibu na-agba nkeji ise kwa ụbọchị?
Na-agba ọsọbụ ezigbo mgbatị ahụ nke na-eme ka ahụ gị zuru oke.Na-agba ọsọ nwere ikeenyere gi akaọkụkalori. Ma ọ bụrụ na ị na-agbalịhapụ ibu ibumgbe ahụNkeji 5nkena-agba ọsọezughi oke. Ijihapụ ibu ibui tosiriọkụcalorie karịa ka ị na-eri.29 nke Dec 2019
Nwere ike idalata site na ịmega 5 nkeji kwa ụbọchị?
Otutu n’ime anyi echebaghiarụ ọrụn'ihi na nanị iseNkeji. N'ikwu eziokwu, ọ dị ka ọ nweghị oge ọ bụlakalee uru. Mana n'eziokwu, obere mkpirisi nkemmega ahụnyere aka na nnukwu ụzọ. Ọbụghị naanịna-emeọ na-enyere akai buru ibu, ma na-emekwa ka ụra gị na ume gị ka mma.Jenụwarị 24. 2021
Kedu ụdị ihe mgbaru ọsọ ahụike abụọ?
Enwere ọtụtụụdịnkeihe mgbaru ọsọna ndị mmadụ nwere ike ịtọ, nke gụnyere nsonaazụIhe mgbaru ọsọ, UsoroIhe mgbaru ọsọ, na ỌrụIhe mgbaru ọsọ. NsonaazụIhe mgbaru ọsọrụtụ aka na nsonaazụ nke mmadụ na-arụ ọrụ n'ikpeazụ. UsoroIhe mgbaru ọsọbụ omume kwa ụbọchị nke kwesịrị ime iji ruoihe mgbaru ọsọ.
Kedu mmega ahụ kachasị mkpa na iwulite ntachi obi obi?
Na-emega ahụ mgbe niile,karịsịaaerobicmmega ahụ, nwere ikemelite ntachi obi nke obi. Aerobicomumenwere ike inye aka kwalite ahụike na ngụgụ ahụike nameliteotu ahu si ekesaa ma jiri oxygen.
Mgbatị ahụ nkeji 3 ọ zuru?
Otu nnukwu atọmgbatị ogebuezuiji gbasie ike ma gbasie ike, ka onye physiotherapist dabeere na Melbourne na-ekwu.Sep 29 2020
Nwere ike iji 10 nkeji rụ ọrụ iji belata?
Gịnwere ikenweta dị ka ezi ọrụ (ma eleghị anya ọ ka mma) na naanịNkeji 10. Nke ana-emeapụtaghị na ọ ga-adị mfe. N'ezie, ọ ga-adị gị mkpa ịrụsi ọrụ ike n'ozi gị dumNkeji 10, ma ọ ga-aba uru. Studies na-egosi na mkpụmkpụ, ufiopmgbatịenyere aka mee ka calorie na-ere ọkụ ogologo oge mgbe ị gwụchara.